This is slide 1 description. You can replace this with your own words. ..
This is slide2description. You can replace this with your own words. .
This is slide3description. You can replace this with your own words. ..
မိမိ ဒေါင်းချင်တဲ့ torrent ဖိုင်ကို ပထမဦးဆုံး ကိုသဘောကျတဲ့ Downloader တစ်ခုခုနဲ့ ဒေါင်းလိုက်ပါ . ဒေါင်းလိုက်ရင် ရလာမှာက ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ ဖိုင်မဟုတ်သေးပါဘူး . ပထမဦးဆုံး link တစ်ခုပဲ ကျလာမှာပါ . အဲ့ဒီ့ဖိုင်ကိုမှ ကျွန်တော်တို့က µTorrent ဆိုတဲ့ Downloader နဲ့ ပြန်ပြီးတော့ ဒေါင်းရပါတယ် . µTorrent နဲ့ ဘာ့ကြောင့်တင်ရတာလဲ ၊ နောက်တစ်ခုက ဘာ့ကြောင့် သုံးကြတာလဲဆိုရင် µTorrent နဲ့ဖိုင်တင်ရင် သူ့မှာ ဖိုင်တစ်ဖိုင်ထဲကို ကိုကြိုက်သလောက် တင်လို့ရပါတယ် . ဥပမာ 1GB ရှိတဲ့ဖိုင်ကို တစ်ခြားဆိုက်တွေမှာ တင်မယ်ဆိုရင် 100 MB (or) 200 MB ဒီလောက်အထိပဲ အတင်ခံပါတယ် . များရင် ခွဲပြီးတော့ တင်ပေါ့ . Torrent အနေနဲ့တင်မယ်ဆိုရင် တစ်ဖိုင်တည်းကိုပဲ 1GB ဆိုလဲ သူက လက်ခံတာပဲ .. ကဲ စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦး . အင်တာနက်မှာ Torrent နဲ့တင်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေကတော့ အများကြီးပါပဲ . တစ်ခြားလင့်တွေသာ တင်ထားတာ မတွေ့ရမယ် torrent ကတော့ အတော်များပါတယ် . http://www.utorrent.com/ ကနေ နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ version ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ . သူက Free ပါ ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုပါဘူး . အပေါ်က ပထမဦးဆုံး ဒေါင်းလိုက်လို့ရလာတဲ့ဖိုင်ကို ကျွန်တော်တို့က Double click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ သူက µTorrent နဲ့ တစ်ခါတည်းကို ဒေါင်းတယ် . Torrent နဲ့တင်ထားတဲ့ဖိုင်ကို µTorrent ကပဲ ဒေါင်းလို့ရပါတယ် . အခုကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ Downloader နဲ့ အဆင်သိပ်မပြေနိုင်ပါဘူး . သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ် .µTorrent တော့ မဒေါင်းခင် တင်ထားဖို့လိုပါတယ် . မဟုတ်ရင် ရလာတဲ့ ပထမဖိုင်ကို Double click နှိပ်ရင်လဲ ဘာမှထူးမှာမဟုတ်ပါဘူး ဒေါင်းလော့လုပ်နည်း(၁) ပထမဦးဆုံး ကိုဒေါင်းချင်တဲ့ ဖိုင်ကို ကြိုက်တဲ့ Downloader နဲ့ဒေါင်းပါ . ဖိုင်တစ်ဖိုင် ကျလာပါလိမ့်မယ် . (၂) ရလာတဲ့ဖိုင်ဟာ kb သာသာပဲ ရှိပါတယ် . အဲ့ဒီ့ရလာတဲ့ ဖိုင်ကို Double click နှိပ်လိုက်ပါ . (၃) အခု µTorrent ထဲကို တစ်ခါတည်း သူသွားပြီး အဲ့ဒီ့ link ကို µTorrent က သိတာနဲ့ တစ်ခါတည်း Download အလုပ်ကို စလုပ်နေပါလိမ့်မယ် မီးပျက်လဲ ကိစ္စမရှိပါ . ပြီးတဲ့နေရာကနေ ပြန်ဒေါင်းပါလိမ့်မယ် . သူ့မှာ အခွင့်အရေးဘာရှိလဲဆိုရင် . ကိုဒေါင်းမယ့် Torrent ဖိုင်ရဲ့ speed ပါပဲ . ဖိုင်တိုင်းဖိုင်တိုင်းမှာ speed ချင်း မတူပါဘူး . speed နိမ့်တဲ့ ဖိုင်ကို ဒေါင်းရင် ကြာမယ် . speed မြင့်မြင့် ရှိတဲ့ဖိုင်ကို ဒေါင်းရင် မြန်မယ် . ကိုသဘောကျတဲ့ Link တိုင်းမှာ speed တစ်ခါတည်း ပါပြီးသားပါ . ပြီးတော့ ရှိပါသေးတယ် . အဓိကက ကိုသတိထားရမှာပေါ့ . ကို့အရင် ဘယ်နှစ်ဦးက ဒေါင်းထားပြီးပြီလဲ ဆိုတာကို လိုက်ရှာပြီးတော့ အများဆုံး ဒေါင်းတဲ့ link ကိုပဲ ဒေါင်းကြပါ . ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုရင် လူများများဒေါင်းတဲ့လင့်ကသာ အဆင်ပြေနိုင်မယ့်အပြင် virus ကိုလဲ စိတ်ချရပါတယ် . ကျွန်တော်တို့ကသာ virus ပါပါ မပါပါ စိတ်မ၀င်စားပေမယ့် . နိုင်ငံခြားသားတွေကတော့ ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းမယ်ဆိုရင် သေချာမှ ဒေါင်းတာပါ . အဲ့ဒါကြောင့် သူတို့တွေ လူများများ ဒေါင်းတဲ့ဖိုင်ဆိုရင် အဆင်ပြေတာပေါ့ . တစ်ချို့ဖိုင်တွေက ဒေါင်းသာဒေါင်းတာ ဖိုင်က တစ်ဝက်နဲ့ ပျက်ကျတာနဲ့ ၊ အဆင်မပြေတာနဲ့နဲ့ တွေ့ရာလင့် တစ်ခုကို ဒေါင်းလိုက်ပြီးမှ အဆင်မပြေရင် ပင်ပန်းရကြိုးမနပ်ပါဘူး . အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ ..
Nokia phone တွေအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Nokia pc suite
ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်ချိတ်မယ် ဆိုရင်တော့ Nokia pc suite က မရှိမဖြစ်ကို လိုပါတယ် . bluetooth နဲ့ သုံးရင်တော့ ဒီကောင်လေး မလိုပါဘူး . ဒါပေမယ့် usb cabel နဲ့ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ လိုအပ်လာပါပြီ . Direct ချိတ်ဖို့အတွက် PC က ကိုသုံးတဲ့ nokia ကို သိဖို့အတွက်ပါ . အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ . direct link နဲ့တင်ပေးထားပါတယ် . (၂)နေရာကပါ . တစ်ခုမရရင် တစ်ခုနဲ့ဒေါင်းပါ .
Virus ကြောင့် ပျောက်နေတဲ့ Tools တွေကို ဘယ်လို ပြန်ပြင်လို့ရနိုင်မလဲ
မေးတာကတော့ လူအတော်ကို များနေပါပြီ . Folder option ပျောက်ရတာနဲ့ Run Box ပျောက်ရတာနဲ့ အမျိုးမျိုးပါပဲ . အခုဒါလေးကတော့ လွယ်လဲလွယ်တယ် . သုံးရတာလဲ အဆင်ပြေပါတယ် . ကဲသုံးကြည့်လိုက်ပါဦး . သူပြန်ဖော်ပေးနိုင်တဲ့ (၁၀)မျိုးကို အောက်မှာ ရေးပေးထားပါတယ် . ကျွန်တော်တို့လဲ အဲ့ဒီ့ ဟိုဟာပျောက်လိုက် ဒီဟာပျောက်လိုက်နဲ့ ပြန်ပြန်လုပ်နေရတဲ့ ဒုက္ခကလဲ မသေးလှပါဘူး . တစ်ခါတစ်လေ လုံးဝသုံးမရလို့ ၀င်းဒိုးအသစ်ပြန်တင်ရတဲ့အခါတွေလဲ ဒုနဲ့ဒေးပါ . ကျွန်တော်အောက်မှာ Download လုပ်ဖို့ကိုပါ တင်ပေးထားပါတယ် . သူကလွယ်ပါတယ် . enable ပေးလိုက်တာနဲ့ ပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ..Windows control panel
Start Menu - Run
Control Panel - Display option
Download mediafire ၊ Download multiupload
ဒါက ညီမငယ်တစ်ယောက်က မေးထားလို့ပါ . မေးလ်နဲ့ပို့တာဆိုတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး . မေးလ်ပို့တဲ့သူက များတဲ့အပြင် forward mail တွေကလဲ တစ်သီကြီး . ဘာအဓိပ္ပါယ်မှလဲ မရှိဘူး . forward mail တွေကို လိုက်ပို့နေတယ် . ကျွန်တော်အခု filter နဲ့ forward mail ပို့တဲ့သူတွေ ရဲ့ မေးလ်ကို Block လုပ်ထားလိုက်ပါတယ် . ဒီ့အတွက် သူတို့တွေရဲ့ မေးလ်တွေဟာ in box ထဲကို ရောက်လာမှာ မဟုတ်ဘဲ Trash ထဲကို တစ်ခါတည်း ရောက်သွားမှာပါ . Trash ထဲမှာ ရောက်သွားပြီးတဲ့ မေးလ်တွေကိုတော့ ကျွန်တော် မဖတ်ပါဘူး . အကုန်လုံးကို Delete လုပ်ပစ်ပါတယ် . Forward mail ပို့တဲ့အခါ ၃ ခါအထိ ကျွန်တော် လက်ခံပါတယ် . ဒီ့ထက် ပိုလာတာပဲဖြစ်ဖြစ် .. ၃ ကြိမ်အထိ ပို့တဲ့သူဟာ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ စာတွေကိုပဲ ဆက်ပို့နေတယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် တစ်ခါတည်းကို အဆိုပါ mail ပိုင်ရှင်ကို block လုပ်ပစ်လိုက်ပါတယ် . တစ်နေ့ကို မေးလ်ပေါင်း အစောင် 200 လောက်ထဲကနေ မသိလို့မေးလာတဲ့မေးလ်တွေကို လိုက်ရှာနေရတာက အလုပ်တစ်ခုပါ . အဲ့ဒီ့အတွက် ကျွန်တော့်ကို နားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် . တစ်ကယ်တော့ အရေးကြီးလို့ forward mail ပို့တယ်ဆိုရင် ထားလိုက်ပါတော့ . ကဲ ကျွန်တော် gmail account ကို မလိုချင်တဲ့သူများအတွက် ဖျက်နည်းကိုပြောပြပါ့မယ် . လွယ်ပါတယ် . မသိသေးတဲ့သူများအတွက် ရည်ရွယ်တာပါ . သိပြီးသားလူများ နှာခေါင်းမရှုံ့ကြပါနဲ့ . ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က မစွမ်းဆောင်နိုင်ပဲ သူများလုပ်တဲ့အလုပ်ကို သားပုတ်လေလွင့်ပြောနေတာတွေက မကောင်းပါဘူး . ကိုတတ်နိုင်ရင် တတ်နိုင်သလောက်ကလေးလုပ် . တစ်ချို့တွေရှိပါတယ် . သူများကိုတော့ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး အပြစ်တွေပြောလို့ ကိုယ့်အပြစ်ကို မမြင်နိုင်တဲ့သူတွေကိုလဲ တွေ့ရပါသေးတယ် . တစ်ပါးသူကိုကျတော့ သံ brush နဲ့ တိုက်ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျတော့ မွှေးပွ brush နဲ့ မတိုက်ပါနဲ့ . တစ်ယောက်ယောက်ကို ပုတ်ခတ်ချင်တယ်ဆိုရင် Direct ပြောလိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ် . ကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကို တစ်ပါးသူ လုပ်နေတာသိနေရင် . ကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဝေဖန်တာ မကောင်းပါဘူး . ကိုနိုင်တယ်ထင်ရင် လုပ်ပစ်လိုက် ၊ ကျွန်တော်အခုအချိန်အထိ ဘယ်ဘလောဂ်ပိုင်ရှင်က ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် တစ်ခါမှ မရေးခဲ့ဖူးဘူး . သူလဲ သူဝါသနာပါလို့ သူလုပ်တယ် ၊ လုပ်နိုင်သလောက်လုပ်တယ် ၊ ကိုလဲ ကိုယ်နိုင်သလောက်ပဲ လုပ်မယ်၊ လုပ်နိုင်ရင် လုပ်မယ်၊ မလုပ်နိုင်ရင် ပိတ်ပစ်လိုက်မယ်၊ ဒါပါပဲ ဘယ်သူ့ကိုမှတော့ ကျွန်တော် ပုတ်ခတ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးလိုက် ၊ ငါကကော သူတတ်စွမ်းသလောက် လုပ်ပေးနေတဲ့ အတိုင်းအတာအထိ ဘာတွေ လုပ်နိုင်သလဲ ၊ လုပ်ပေးခဲ့ပြီးပြီလားပေါ့၊ဟိုတစ်နေ့ကလဲ အဲ့လိုပဲ သာမညတောင်ဆရာတော်၏ အိပ်မက်စာလွှာတဲ့ . ဘာတဲ့ ဆက်လက်ဖြန့်ဝေရင် အကျိုးပေးမယ် ၊ မယုံကြည်ပဲ မဖြန့်ဝေရင် ဒုက္ခရောက်မယ် သေမယ်တဲ့ . ??? အဓိပ္ပါယ်ကိုမရှိတာ . အဲ့ဒီ့စာတစ်စောင့်သံသရာကြောင့် ၅ ရက်ဆက်တိုက်လောက် လိုက်ဖျက်နေရသေးတယ် . သေမှာကြောက်တဲ့သူတွေ ဆက်လက်ဖြန့်ဝေတာနေမှာပေါ့ . ဦးနှောက်မရှိကြတာများပြောပါတယ် . အဲ့လိုမျိုးစာကို မဝေလို့ သေသွားမယ်ဆိုရင် ဆယ်ခါပြန် အသေခံလိုက်မယ် . တစ်ကယ်ပြောတာ . သံဃာတော်တွေ ရဟန်းတွေဟာ ဘယ်တော့မှ လူတွေကို ကျိန်စာတိုက်ပြီးတော့ . အဲ့လို မဝေခိုင်းဘူး . သေမှာတို့ ဒုက္ခရောက်မှာတို့က ကျိန်ဆဲတာပဲလေ . ကျွန်တော်တို့ ဘုရားရှင် သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကာလတုန်းက လူဝတ်ကြောင်တွေကို ကျိန်ဆဲတာတို့ ကျမ်းကျိန်ခိုင်းတာတို့ ရှိခဲ့သလား . ကျွန်တော်တော့ဖြင့် ဘယ်ကျမ်းထဲမှာမှ မတွေ့ဘူးပါဘူးဗျာ . အဲ့ဒါတွေကို ယုံတဲ့သူက ရှိသေးတယ် . ဥပ္ပါဒ်ဒဏ်ကြောင့် ဥပ္ပါဒ်ဖြစ်တယ်တဲ့ . အဲ့ဒါက ဥပမာတစ်ခုပဲရှိသေးတယ် . ကျန်တာပို့တဲ့သူတွေကလဲ ရှိသေးတယ် . အိမ်ကကြောင်လေး သေးမပေါက်တာကအစ forward mail ပို့တယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားသာကြည့်တော့ . လက်ယားပြီး လက်စွမ်းပြချင်တယ်ဆိုရင်လဲ သူများတွေလို ကိုယ်ပိုင်ဘလောက်ရေးပေါ့ . ကြောင်သေး မပေါက်တာတင်မဟုတ်ဘူး . ဆွေခုနှစ်ဆက် မျိုးခုနှစ်ဆက်အကြောင်းက အစ ရေးလို့ရတယ် . တစ်နေ့တစ်နေ့ ဒါတွေကိုပဲ လိုက်ဖျက်နေရတာ ကျွန်တော့်မှာ အလုပ်ကို လုပ်ရတယ် မရှိဘူး . မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကို အဲ့ဒီ့ အစောင် 200 လောက်ထဲက မနဲ ပြူးပြဲပြီးရှာရတယ် . တစ်ခါတစ်လေလဲ မှားဖျက်မိတဲ့အခါတွေလဲ မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ . (၁) Google Account ကိုဝင်ပြီး settings ကို နှိပ်လိုက်ပါ . (၂) Setting ထဲက Accounts and Import ကိုရွေးလိုက်ပါ .(၃) အောက်ဆုံးက စာလုံးအပြာရောင်နဲ့ရေးထားတဲ့ Google Account settings ကိုနှိပ်လိုက်ပါ .(၄) My products နဘေးက Edit ကို နှိပ်လိုက်ပါ ။ (ဓါတ်ပုံအောက်တည့်တည့်တွင်ရှိ)(၅) DeleteaProduct အောက်က Remove Gmail permanently ဆိုတာကို ရွေးလိုက်ပါ . ကဲ အခု ယခင် gmail အကောင့် ပျက်သွားပါပြီ . စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦး .
zaw2aung: ညီရေ RPD 10 ကို သုံးတာ restart ကျကျသွားတယ်ကော စစ်တာကိုလဲမသိရဘူး သုံးပုံလေးရှင်းပြပါဦးအောက်မှာပုံနဲ့ပြထားပါတယ် . ဖိုင်ပြန်စီတာက လွယ်ပါတယ် .. .zaw2aung: ညီရေ အဲလိုတော့ရတယ်လေ အခုဟာက file select > Start ဆို ရင် restart ကျကျသွားတယ်လေအဲလိုဖြစ်နေလို့ပြောပြတာ ကို့စက်ကပဲဖြစ်တာလားမသိဘူး .. zaw2aung ရေ ဒီပို့စ် ကအတိုင်း HDD ရဲ့ bad sector ကို fixed လုပ်လိုက်ပါဦး . ပြီးတာနဲ့ restart ချဖို့ မမေ့ပါနဲ့ . bad sector ကို fixed လုပ်ပြီးတိုင်း restart ချပေးရပါမယ် . bad sector ကို fixed လုပ်ပြီးမှ ဖိုင်ပြန်စီလိုက်ပါ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် .
istar: အခုကျွန်တော်သုံးနေတာ window vista ပါ.. ကျွန်တော့် window မှာ ဇော်ဂျီဖောင့် ကို install လုပ်တာမရဘူးဖြစ်နေလို့ပါ .ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . Vista အသုံးပြုသူများ အဆင်ပြေနေကြတဲ့ zawgyi ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . တစ်ခုနဲ့အဆင်မပြေရင် နောက်တစ်ခု ထပ်စမ်းပါ . များသောအားဖြင့်တော့ Blogger Day Zawgyi နဲ့အဆင်ပြေကြတာ များပါတယ် . အောက်မှာ ၂ ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အဆင်မပြေရင် ပြန်အော်ခဲ့ပါ .Blogger Day Zawgyi >> Downloadကဲ အဲ့ဒါနဲ့မှ အဆင်မပြေသေးရင် ဒီကို သွားပြီးတော့ Zawgyi Myanmar Unicode Keyboard L ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ Read More
Raxco PerfectDisk 10 နဲ့ ကွန်ပျူတာ မြန်အောင် ဖိုင်ပြန်စီမယ်
ဒီဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးက ဖိုင်တွေကို စနစ်တကျပြန်ပြီး စီပေးတာပါ .. ကွန်ပျူတာ အရမ်းကြာ နေတယ် .. hung နေတတ်တယ်ဆိုတာ ဖိုင်တွေ စနစ်တကျမရှိမှုလဲ တစ်ခု အပါအ၀င်ပါ ....... သူ့ကို run ထားမယ်ဆိုရင် တစ်ခြား program တွေကို လုပ်ဆောင်ထားရင် ပိတ်ထားလိုက်ပါ .. အကောင်းဆုံးက ကွန်ပျူတာ သုံးစွဲခြင်းကို မလုပ်ပါနဲ့ ခဏ ရပ်ထားလိုက်ပါ . အထူးသဖြင့် network လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းထားပြီးမှ လုပ်ပါ ... ကျွန်တော် ဒီကောင်လေးကိုပဲ သုံးနေတာပါ . သုံးဖို့လဲ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် . တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်လောက်တော့ ဖိုင်ပြန်စီပါ . ကျွန်တော်တို့ကအနေနဲ့ ဖိုင်ပြန်စီတာကို မပျင်းပါနဲ့ . တစ်ပိုင်းကို 20 MB စီပဲရှိပါတယ် . သေးသေးလေးတွေခွဲပေးထားတာမဟုတ်ပါ . မြန်မာပြည်က လူတွေ အဆင်ပြေအောင်လို့ သက်သက် အပင်ပန်းခံထားရတာပါ . speed ကောင်းတဲ့သူများ download လုပ်နိုင်ဖို့လဲ တင်ပေးထားပါတယ် . Download mediafire
ကျွန်တော့ရဲ့ memory stick ကို safely remove မလုပ်ပဲနဲ့ ဒီတိုင်း ဆွဲချွတ်လိုက် မိပါတယ် နောက်တစ်ခါ ပြန်ထိုးတော့ ကျွန်တော့်စတစ် ကလေးက ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့နာမည်နဲ့မဟုတ်တော့ပါဘူး Removable Disk ဆိုပြီး ပုံမှန်နာမည်ဖြစ်သွားပါတယ် နောက်ပြီးတော့ စတစ်ကို ဖွင့်လိုက်ရင် အောက်ကပုံအတိုင်းပဲ မြင်နေရပါတယ် .. Memory stick တွေကို အကောင်းဆုံးက အင်္ဂလိပ်လိုပေးတာ အကောင်းဆုံးပါ . မြန်မာလို ပေးထားတဲ့ memory stick ထဲမှာရှိတဲ့ pdf ဖိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ် . တစ်ခြားဖိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဖွင့်တဲ့အခါမှာ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ပြဿနာဖြစ်တတ်ပါတယ် .. မြန်မာလိုပေးထားတဲ့ stick ထဲက pdf ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို ဖွင့်လိုက်ရင် တစ်ခါတစ်ရံ error တက်လာပါတယ် . မဖွင့်ပေးပါဘူး . Flash Drive နာမည်ကို ဘယ်တော့မှ မြန်မာလို နာမည် မပေးမိပါ စေနဲ့ . အင်္ဂလိပ်လိုပေးလိုက်ပါ . Virus ကြောင့် format ချမရတဲ့ Flash drive ကို (မြန်မာလို နာမည်ပေးထားရင်အင်္ဂလိပ်လိုနာမည်ပြန်ပေးလိုက်ပါ) . ပြီးရင် တစ်ခြားကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ သွားထိုး . AutoPlay တက်လာရင် Cancel ပေးလိုက် . ပြီးတာနဲ့ format ချလိုက် . အိုကေသွားပါလိမ့်မယ် . ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံ အဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါသေးတယ် . ဒီဖက်က ကွန်ပျူတာမှာ virus ကြောင့် format ချမရရင် တစ်ခြားကွန်ပျူတာနဲ့ သွားချ . ဒါပေမယ့် တစ်ခုသတိထားရမှာက AutoPlay တက်လာတာနဲ့ cancel ပေးဖို့လိုပါတယ် . မဟုတ်ရင် အဲ့ဒီ့ကွန်ပျူတာကိုပါ Virus ၀င်သွားပြီး format ချ မရဖြစ်တတ်ပါတယ် .
ညီနေမင်းAnswers, Blog and Html
.js နဲ့ eot ကို ဘယ်နေရာမှာ စိတ်ချလက်ချ တင်လို့ရနိုင်လဲ
ဒီနေ့ည ဖြစ်ပျက်လိုက်တာကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရီလဲရီချင်တယ် . အပြစ်လဲတင်မိတယ် . ဟိုတစ်နေ့က ညီငယ် တစ်ယောက် လာပြောတာကို အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ထားလိုက်မိတယ် . အစ်ကိုတဲ့ အစ်ကို့ဆိုက်ကို ကျွန်တော် ၀င်ပြီး ကြည့်လိုက်ရင် kaspersky က ထထ ပြီး စစ်နေတယ်လို့ပြောတယ် . ကျွန်တော်ကလဲ ထထစစ်ရအောင် kaspersky က zip ဖိုင်တို့၊ rar ဖိုင်တို့အထဲမှာ virus ရှိမရှိ အတိအကျ မစစ်နိုင်ပါဘူးလို့ . စဉ်းတော့ စဉ်းစားသား . ဘာ့ကြောင့်များလဲပေါ့ . ဒါပေမယ့်စိတ်ထဲက အမှတ်တမဲ့ပဲနေခဲ့တာ . ပြဿနာက အခုမှစတာ ကျွန်တော် http://www.ripway.com မှာ တင်ထားတဲ့ eot ဖိုင်ကို သွားသွားစစ်ပြီး . eot ဖိုင်ကို သွားပြီး စစ်နေတာကိုး . အဲ့ဒါနဲ့ eot အသစ်ပြန်လုပ် . ပြီးတာနဲ့ ကိုဝယ်ထားတဲ့ http://www.nyinaymin.net မှာ သွားတင် . အစကတည်းက ကို့ hosting မှာ တင်ရင် ဘာပြဿနာမှ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး . အခုတစ်ခါတည်း သူငယ်ချင်းများကိုလဲ လက်တို့ချင်ပါတယ် . ကျွန်တော် တွေ့တဲ့ ဆိုက်တော်တော်များများကတော့ဖြင့် link တွေ သေရတာနဲ့ . ဖိုင်ဖျက်ရတာနဲ့ . သတ်မှတ်တဲ့ bandwith ကျော်ရတာနဲ့ . ရှုပ်ယှက်ကို ခတ်နေတာပဲ . တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ဖြစ်နေတာ . အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင် အခု အကြံပေးချင်လို့ . ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ http://www.fileden.com, http://www.ripway.com တို့ကို အားမကိုးပဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့မှာရှိနေပြီး ကျော်ကျော်ပြီး eot တင်ဖို့တို့ .js ဖိုင်တွေ တင်ဖို့တို့ကို အဝေးကြီးမှာ လိုက်စဉ်းစားနေတယ် . မလိုပါဘူး . အနီးလေးမှာကိုရှိပါတယ် . သူက ဖျက်လဲဖျက်မှာမဟုတ်သလို . ကျွန်တော်တို့နဲ့လဲ ရင်းနှီးပြီးသား . ning ဆိုက်လေဗျာ . အောက်မှာ တင်ထားတဲ့ဖိုင်http://api.ning.com/files/FvwQ8mHyi4BHXYJMNypK54w9ZrVm9Tq55kKf6i*1PZsvFD3dro1t2n-TdNEYsxAFS0Ri-7gTMlQ9yMrfX3iIQjT*FX-Tlk81/ZAWGYIO0.eothttp://api.ning.com/files/FvwQ8mHyi4AldchkSQQmvTYW5kD5nCD1qXTSDveh91kVBnbyJRdNROXsKlUuC6ge2EckPyqyaMf3qg4pnFbCGnMBF7F0XDzS/ZAWGYIO1.eothttp://api.ning.com/files/FvwQ8mHyi4DMDvk1YQhyPftYd7s848fBfinCEUAG0iHhEKlYOliKymOS2t6VP*d-cp4GQbG0xMDj9CGZUGiLE-JOu*meJCvl/ZAWGYIO2.eothttp://api.ning.com/files/5tNgiQEyJzNLFEJN7a*1ma8WzsmQs82jF0XNGRC99H0lazSajae0Dg3YGXBpU8fELdoVOUgkEnleTmhfBZ8HnHX87RX4PWLJ/ZAWGYIO3.eotနောက်ဆုံးအဆင့်ဗျာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ခိုကိုးရာမဲ့ပြီး ဘယ်ဆိုက်တွေကမှ လက်မခံတဲ့ .js ကိုတောင်မှ စိတ်ချမ်းလက်သာနဲ့ တင်နိုင်ပါတယ်ဗျာ .http://api.ning.com/files/5tNgiQEyJzMFNlh-GM97pZLNa29lzFvsnE1aIYq7Z5YrMm94ljaW6d-bhwT0ENmIAuOJwT9vTQcb7AaAOsEvAo1umI25vzJf/dtree.jsကဲ စိမ်းချမ်းလက်သာနဲ့သာ တင်ကြတော့ဗျာ . အခုဆိုရင် googlepage ကလဲ လက်မခံတော့ဘူးလားမသိ ကျွန်တော်တော့ မတင်ဖူးသေးဘူး googlepage မှာ . ကဲဗျာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး Ning မှာ တင်ဖို့ သတိရသွားလဲဆိုရင် ဒီနေ့ည zawgyi.net ကိုသွားပြီးတော့ zawgyi-one font ကို download လုပ်မလို့သွားကြည့်လိုက်ပြီးတော့ မနှိပ်ခင် pointer နဲ့ ထောက်ထားကြည့်လိုက်တော့ အောက်မှာက ပေါ်နေပြီ ဖိုင်ကိုတင်ထားတာက ning မှာတဲ့ မယုံရင်သွားထောက်ကြည့်လိုက် . အဲ့ဒါမှ သွားသတိရတယ် . eot တို့ .js လဲ လက်ခံလောက်ပါတယ်လို့ . စမ်းလဲစမ်းကြည့်ရော အဟုတ်ပဲဗျာ . js ကိုလဲလက်ခံထားတယ် . တစ်ကယ့်ကို စေတနာကောင်းတဲ့ ning ဆိုက်မှာ ဒါလေးတွေ တင်လို့ရပါတယ်ဆိုတာကို လက်တို့လိုက်တာ . ကဲ ဘော်ဒါ ဘော်ကျွတ်တို့လဲ စမ်းကြည့်ကြပါဦး . နောက်ဆုံးတင်စရာ ning ဆိုက်မရှိရင် ကျွန်တော့် http://www.nyinaymin.ning.com မှာ လာတင် . ကျွန်တော် အစမ်းတင်ပြထားတာရှိတယ် ဖိုင်ကိုသွားကြည့်လို့ရတယ် . http://nyinaymin.ning.com/forum/topics/zawgyi2-1 အဲ့မယ်သွားကြည့် ကျွန်တော်တင်ထားတယ် . .js ကိုလက်ခံပြီဆိုတော့ readmore အတွက်လဲ စိတ်ချရသွားပါပြီ . ခဏခဏ လင့်သေနေတာတွေ မရှိတော့ပါဘူး .
အဟီး ကလေးလေးတွေ ကျနေတာပဲ . ကိုယ့်ကွန်ပျူတာ model number ကို ကို မသိဘူးဆိုတော့ တစ်ခုခု ဖြစ်ရင် ဘယ့်နှယ့်လုပ်မတုန်း . ဦးဇင်းကို ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော် . ဟီးဟီး .ဒကာလေးတွေကိုပြောတာ .. Model no. ကို ကွန်ပျူတာရဲ့ ဘေးတွေ အပေါ်တွေ နဲ့ အထဲမှာ ၄-၅ နေရာလောက်ခွဲပြီးတော့ ထားတတ်ပါတယ် . မြင်သာတဲ့နေရာ မှာပဲ ထားတာပါ . အောက်မှာ ပုံတွေနဲ့ ပြထားပါတယ် ... Driver တွေကို မသိချင်နေ .. ကို့ကွန်ပျူတာ model number ကိုတော့ အလွတ်ကျက်ထားပါ . ကျွန်တော်တို့ သြကာသ ကိုရသလိုပေါ့ . အလွတ်ရအောင်ကျက်ထား . အဋလုံပဋိလုံပေါ့ . ဟီးဟီး .. အကူအညီတောင်းတဲ့အချိန် . အစ်ကိုရာကူညီပါဦး . ကျွန်တော့် ဟိုကောင်ကြီးဗျာ . အဲ့ဒါ ဟိုဟာဖြစ်နေလို့ အကူအညီတောင်းရင် ကျွန်တော်လဲ ဟိုဒင်းလုပ်တတ်မှာမဟုတ်ဘူး . ဟီးဟီးအကောင်းဆုံးအဖြေကတော့ ... (၁) Start >> Programs >> Accessories >> System Tools >> System Information ကိုသွားလိုက်ပါ အဲ့ဒီ့အထဲမှာ အကုန်ရှိပါတယ် . ကိုယ့်ကွန်ပျူတာ model number၊ Driver အမျိုးအစား . အကုန်ရှိတယ် .
Virus ကြောင့် ရှိနေတဲ့ File တွေက Hidden File တွေဖြစ်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ပြန်ယူမလဲ
ဒါကတော့ အခုတစ်လော ဖြစ်ပျက်နေကျ အလေ့အထ တစ်ခုလိုတောင်ဖြစ်နေပါပြီ . ကျွန်တော်ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ဆီက ထိုင်းသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပျက်တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးပါ . သူက ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ထားတယ် . ဒါပေမယ့် လုံးဝကို မမြင်ရတာပါ . ဖိုင်တွေက hidden file တွေဖြစ်နေတယ် . အဲ့ဒါနဲ့ kaspersky 2009 နဲ့သတ်လိုက်တယ် . သတ်လိုက်နိုင်ပါတယ် . မိတာက .exe virus ပါ . exe မှာတောင် မနည်းပဲ ဗိုင်းရပ်စ် နာမည်တွေက . အခုမိတဲ့ အကောင်ကတော့ နဲနဲဦးနှောက်စားခိုင်းတယ် . နည်းသိရင်တော့ လွယ်ပါတယ် . သူက ဖိုင်တွေကို hidden file အဖြစ် ဖျောက်ထားလိုက်တယ် . ဒါကို ကျွန်တော်တို့က ထုံးစံအတိုင်း Tools >> Folder Options >> view >> Show hidden file and folder ဆိုတာကို ကလစ်ပြီး သူ hidden လုပ်ထားတာကို ပြန်ပြီးတော့ ဖော်မယ်ဆိုတာကိုလဲ သိနေတယ်ဗျာ . အဲ့ဒီ့တော့ ကျွန်တော်တို့က Show hidden file and folder ကို ရွေးပြီး ok နှိပ်လိုက် . ကျန်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် ဖိုင်တွေက ၀ါးတားတားလေးပေါ်နေတယ် . အခုအချိန်မှာတော့ ကိုက Show hidden file and folder ကိုရွေးလိုက် . Do not Show hidden file and folder ကို auto choice ပြန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ် . အဲ့ဒီ့ အခက်အခဲကို ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသား ဖြစ်တဲ့ ဒီပို့စ် က software ကို Download လုပ်ပြီး Hidden Files ဖိုင်တွေကို ပြန်ယူလိုက်ပါ . copy ကူးပြီး တစ်နေရာမှာ save ထားလိုက် . ပြီးတာနဲ့ အဲ့ဒီ့ flash drive ကို format ပြန်ချပစ်လိုက် . အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် .အောက်မှာ ပုံတွေနဲ့ပြထားပါတယ် . . Read More
Asus F5n notebook drivers download for Windows Vista
ကိုသွေး: အစ်ကိုရေ ASUS က ထုတ်တဲ့ F5N Series အတွက် drivers for xp ကို တစ်ချက်လောက် ရှာပေးစေချင်ပါတယ်အစ်ကို ဒကာလေးရေ ဦးဇင်းတင်ပေးလိုက်ပါပြီ .. :)Asus Inf Chipset driver Update for Vista Audio Driver VistaDownloadGraphics Driver Lan Driver V2je-F5n Modem driverDownloadRTS5158 u6ep-F5n Realtek USB Card Reader driverDownloadTOUCHPAD extra driver Azurewave GE740 AE750 NE770 GE780 WLAN DriverDownloadBlueTooth driver D-Max_GD-6A31 Camera DriverDownload
ကိုသွေး: အစ်ကိုရေ ASUS က ထုတ်တဲ့ F5N Series အတွက် drivers for xp ကို တစ်ချက်လောက် ရှာပေးစေချင်ပါတယ်အစ်ကို ဒကာလေးရေ ဦးဇင်းတင်ပေးလိုက်ပါပြီ .. :)AFLASH2 Utility Inf Chipset Update for WIN XP DownloadATK_Hotkey UTILITY for WIN XPDownloadAudio Driver Graphics Nvidia Vga Driver Lan Driver for WIN XPDownloadModem driver RICOH card reader driver TOUCHPAD driverDownloadAsus Azurewave_GE-780 WLAN Driver BlueTooth driver D-Max_GD-5A31 Camera DriverDownload
ညီနေမင်းAcer Drivers, Drivers, Laptop Driver များ
မကြာခင် link တွေ ပြန်ပြင်ပေးသွားပါမည် ...ChipsetAspire M1641 M3641 M5641Windows XP Driver(Download-1) (Download-2)LANAspire M1641 M3641 M5641Windows Vista Driver(Download-1) (Download-2)VGA GeForce 8400Aspire M1641 M3641 M5641Windows Vista Driver(Download)VGA GeForce 9300GEAspire M1641 M3641 M5641Windows Vista Driver(Download)VGA NVIDAAspire M1641 M3641 M5641Windows Vista Driver(Download)VGA ATIAspire M1641 M3641 M5641Windows Vista Driver(Download)SATA RAIDAspire M1641 M3641 M5641Windows Vista Driver(Download-1) (Download-2)Modem Motorola UbiSurf SM56 Pro-Nets HPI56M3FAspire M1641 M3641 M5641Windows Vista Driver(Download-1) (Download-2)AudioAspire M1641 M3641 M5641Windows Vista Driver(Download-1) (Download-2)TV Tuner PE585QAAspire M1641 M3641 M5641Windows Vista Driver(Download)TV Tuner PG583Aspire M1641 M3641 M5641Windows Vista Driver(Download)TV Tuner WinTV1200Aspire M1641 M3641 M5641Windows Vista Driver(Download)
မကြာခင် link တွေ ပြန်ပြင်ပေးသွားပါမည် ...ဒီနေ့တော့ အစီအစဉ် တစ်ခု လုပ်မယ်လို့ စဉ်းစားမိလိုက်တယ် . အဲ့ဒါက ဘာလဲဆိုတော့ Computer ကို သူ့ Model no. အလိုက် Driver တွေကို စုစည်းပြီး တင်ပေးမယ်လို့ စဉ်းစားမိလိုက်တာပါ . ဒီနေ့တော့ ပထမဦးဆုံး ကျွန်တော့် ကွန်ပျူတာ Model no. ကနေ စပြီး တင်ပါ့မယ် . တစ်ခြား ညီအစ်ကိုများလဲ Share ပေးချင်တယ်ဆိုရင် ပေးလို့ရပါတယ် . ကျွန်တော့်ဆိုက်မှာ ပို့စ်တင်ပေးပါ့မယ် .Aspire M1641 M3641 M5641 Windows XP DriversChipsetAspire M1641 M3641 M5641Windows XP Driver(Download)LANAspire M1641 M3641 M5641Windows XP Driver(Download)VGA GeForce 8400Aspire M1641 M3641 M5641Windows XP Driver(Download)VGA GeForce 9300GEAspire M1641 M3641 M5641Windows XP Driver(Download)VGA GeForce 9500GSAspire M1641 M3641 M5641Windows XP Driver(Download)SATA RAIDAspire M1641 M3641 M5641Windows XP Driver(Download)Modem Agere Pro-Nets HPI56L6Aspire M1641 M3641 M5641Windows XP Driver(Download)Modem Motorola UbiSurf SM56 Pro-Nets HPI56M3FAspire M1641 M3641 M5641Windows XP Driver(Download)AudioAspire M1641 M3641 M5641Windows XP Driver(Download)
kaspersky 2009 ကို ဘယ်လို activated key ဖြင့် သက်တမ်းတိုးမလဲ
ဒါကတော့ တောင်းဆိုထားတဲ့ သူတွေအတွက်ကော မသိတဲ့ သူများအတွက်ကိုပါ ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . kaspersky ချစ်သူများအတွက်ပါ ..(၁) License >> Activate the application ကို နှိပ်လိုက်ပါ . (ပုံ-၁)(၂) Activate using the key file ကို ဆက်နှိပ်ပါ .. (ပုံ-၂)(၃) Browse ကိုနှိပ်ပြီး ကို လုပ်မယ့် key ကို လိုက်ရွေးပါ (ပုံ-၃)(၄) key ကို ရွေးပြီး Double click (or) open ကို နှိပ်ပါ . (ပုံ-၄)(၅) Expiration date ကို လိုက်ပြီးတော့ သက်တမ်းဘယ်လောက်ကျန်လဲ ဆိုတာကို လိုက်ရွေးပါ . တစ်ခုမရင် နောက်တစ်ခုကို browse ကနေ ထပ်ပြီးရွေးလို့ ရပါတယ် . (ပုံ-၅)(၆) အိုကေပြီဆိုရင်တော့ Activate ကို နှိပ်လိုက်ပါ . (ပုံ-၆)(၇) Finished ကို နှိပ်ပါ . (ပုံ-၇)(၈) သက်တမ်းဘယ်နှစ်ရက် ကျန်သေးတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရမှာပါ . (ပုံ-၈)
pyut pyut: stick format ချတဲ့အကြောင်းကိုသီးသန့်ရေးပြပေးစေလိုပါတယ်အကိုဒီမှာ ရေးပေးထားပြီးသားပါ . မေးသမျှဟာတွေက ရေးထားပြီးသားတွေချည်းပဲ နဲနဲလေးကြိုးစားပြီး ရှာဖတ်ကြစေချင်တယ်ဗျာ ..=x=x=x=x=x=x==x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=xsaisai: Microsoft office 2010 key လေးကူညီပေးလို့ရမလား။ ကျွှန်တော့ micorsoft က unlincined product ဖြစ်နေတယ်။Serial No. : FF0154DG8521W101 (or) FF543SF54101SFSF=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=xpyiesonehmyu: အကို window7တင်ရင် ကွန်ပျူတာမှာ ram, vga, cpu ဘယ်လောက်ရှိရင်ရလဲခင်ဗျmycomputer ကို rightclick ထောက်လိုက်ပါ ..mycomputer >> rightclick >> porperties ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ အဲ့မယ် computer ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ရေးထားတာ ငါ့ညီလိုချင်တဲ့ ဟာ အကုန်ပါပါတယ် . သေချာကြည့်လိုက်ပါ .=x=x=x=x=x==x=x=x=x=xKo Htet: အကိုရေ NIS 2010 trial resetter ထွက်ပီလားခင်ဗျ?ဒီမှာ ပေးထားပြီးသာပါ ... နဲနဲလေး ရှာဖတ်ပေးပါဗျာ .. လူကများတော့ လိုက်လိုက် ရှာပေးနေရတာ အလုပ်တစ်ခုလို ဖြစ်နေလို့ပါ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် =x=x=x=x=x=x=x===x=x==x=x=x=ကိုသွေး : အစ်ကိုကျွန်တော် မသိလို့မေးရဦးမယ် folder option ပျောက်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သင်ပေးပါဦးဗျာဒီမှာ ရေးထားပေးပြီးသားပါဗျာ . နဲနဲလေးရှာဖတ်ပေးပါ ..
ညီနေမင်းBlog and Html
ဘလောဂ်ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ တိုက်ခိုက်နေတဲ့ သူတွေကို ဘယ်လို Ban မလဲ
minn minn: သုံးလို့မရတော့ဘူး ကိုနေမင်း DeskSoft Desktop Icon Toy 3.3 က Trial Version ကြီးဗျ ကျွန်တော်စက်မှာ0day left ဖြစ်ပြီး ဘယ်လို ဆက်လုပ်လို့ရသေးလဲ ...ကျွန်တော်တင်ပေးတာကတော့ trail မဟုတ်ပါဘူး . serial no. , crack , keygen တစ်ခုခု ထည့်ပေးတတ်ပါတယ် . အခုထပ်တင်ပေးလိုက်ပါပြီ . keygen ထည့်ပေးထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဖိုင် မဖြေခင် တင်ထားတဲ့ anti virus program ကိုတော့ disable ပေးထားဖို့လိုပါတယ် . မဟုတ်ရင် ကျွန်တော်ထည့်ပေးတဲ့ keygen ကို အစ်ကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး .. keygen ဆိုတာနဲ့ anti virus တွေက တစ်ခါတည်း သတ်ပြီးသားပဲဗျ . ဗိုင်းရပ်စ် program တွေက virus ကိုသာ မသတ်နိုင်ရှိရော့မယ် . keygen ဆိုရင်တော့ ဘယ် antivirus program ပဲဖြစ်ဖြစ် သတ်နိုင်ကြတယ်ဗျ . program ရေးတဲ့သူတွေက အဲ့လောက်ထိကို တော်တာ .Download ifile.it ၊ Download mediafire ၊ Download nyinaymin.net
အာရှသားလူလည်: ဘယ်လောက်ပျက်နေတယ်ဆိုတာ graphic လေးနဲ့ပြတဲ့ software ရှိလား .. ကူညီပါကွာ..HDD ရဲ့ bad sector ကို fixed လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့My computer ကို ဖွင့်လိုက်ပါ . ပထမဦးဆုံး C:/ ကို right click နှိပ်ပါ .properties >> Tools ကို ရွေးလိုက်ပါ .. Error-checking အကွက်က check Now ကို နှိပ်လိုက်ပါ ..Automatically fix file system errors နှင့် Scan for and attempt recovery of bad sectors ရှိတဲ့အထဲက Scan for and attempt recovery of bad sectors ဆိုတာကို အမှန်ခြစ် ပေးလိုက်ပြီး start ရွေးပေးလိုက်ပါ .. သူ့ဟာသူ scan ဖတ်ပြီး စစ်ဆေးနေပါလိမ့်မယ် .4 ဆင့် စစ်ပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒါပြီးသွားရင် ok ပေးလိုက်ပါ . ပြီးတာနဲ့ ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်လိုက်ပါ . အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် . ဒီမှာလဲ သွားဖတ်ကြည့်ပါဦး . သူရေးပေးထားတာလေးတွေ ရှိပါတယ် . ကျွန်တော် မနက်ကျမှပဲ bad sector ကို fixed လုပ်ဖို့အတွက် software နဲ့ Defragment လုပ်ဖို့အတွက် software နှစ်ခုကို တင်ပေးပါ့မယ် . အဲ့လောက်ဆိုရင် အဆင်ပြေလောက်ပါပြီ . အသေးစိတ်ကိုတော့ နောက်နေ့မှပဲ ကျွန်တော် ဆက်ရေးပေးပါ့မယ် .. Read More
Windows7Activator Patch the latest patch for windows7( all releases ) , replace your windows7key and allow you to download the latest updates like genuine .Download ifile.it ၊ Download mediafire ၊ Download nyinaymin.net
ဇေယျာအေး : ... ကျနော်ဟာတော့ မဟုတ်ပါဘူး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ကူညီလုပ်ပေး မလိုပါ .. ကိုညီနေမင်းရေbluetooth နဲ့အင်တာနက် သွယ်တာ. အကို ရေးထားတာ bluetooth နဲ့သွယ်တာ မဟုတ်လား.. အဲဒီထဲက ဖုန်နံပတ်နေရာ အကွက်မှာ **99***1# အဲတာက ဖုန်းနံပတ်နဲ့၁နဲ့နောက်က ဟာနဲ့မဟုတ်လား .. 99 တွေမပါဘူးမဟုတ်လာ..ကျနော်က တုံးလိုပါ.. နောက်ထပ် ညီလေးတစ်ယောက်လဲ တောင်းဆိုထားပါတယ် . ကျွန်တော် အောက်မှာ ရှင်းပြထားပါတယ် . ဒါက ထိုင်းဖုန်းအတွက်ပါ ..(1) bluetooth နဲ့ ချိတ်နည်း(2) ကွန်ပျူတာမှာ usb ထိုးပြီး Dial up connection အနေဖြင့် Direct ချိတ်ဆက်နည်း .(1) Bluetooth နဲ့ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်နည်းပထမဦးဆုံး ကိုသုံးမယ့် ကွန်ပျူတာမှာ bluetooth တပ်ထားပါ .Bluetooth အတွက် ကိုသုံးမယ့် bluetooth ရဲ့ Driver ကို တင်ထားဖို့လဲလိုပါတယ် . bluetooth ၀ယ်တိုင်း ပါလာတဲ့ CD ကို ဆိုလိုတာပါ . အဲ့ဒီ့ CD ကို install လုပ်ထားဖို့လဲ လိုပါတယ် .တင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ အောက်က အဆင့်တွေအတိုင်း လုပ်သွားလိုက်ပါ .start menu bar က bluetooth လေးကို နှိပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ . ဘယ်နေရာမှာပဲ bluetooth icon လေးရှိရှိပါ . အဓိကက ဖွင့်လိုက်ဖို့ပါပဲ .Add ကို နှိပ်လိုက်ပါ .. ပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့က bluetooth နဲ့ ကွန်ပျူတာ ချိတ်ဆက်မှုရှိဖို့အတွက် အောက်မှာပြထားသလိုမျိုး code number ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ . ဒါက ချိတ်ဆက်မယ့် သင်္ကေတဖြစ်တဲ့အတွက် bluetooth မှာ nyinaymin လို့ ရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင် ဖုန်းမှာလဲ nyinaymin လို့ရိုက်ထည့်ရမှာပါ . ကျွန်တော်က ဥမာပြောတာပါ . ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ရင်တော့ နံပါတ်ကိုပဲ ရိုက်ထည့်ပါ . သူတို့ဂဏန်းနှစ်ခု တူဖို့ပဲ အရေးကြီးတာပါ . ရိုက်ချင်တာရိုက် . ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ချိတ်ဆက်မိသွားပါလိမ့်မယ် .. ကဲ ပထမအဆင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင် ဒုတိယအဆင့်လာမယ် ..ဒုတိယအဆင့်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ bluetooth နဲ့ ကွန်ပျူတာ ချိတ်ဆက်မိသွားပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Dial up connection အတွက် ပြင်ဆင်စရာရှိတာ ပြင်ဆင်ရတော့မယ် . အဲ့ဒီ့ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုလုပ်ရတယ် ဆိုတာကို ဒီမှာ ရေးပေးထားပြီးသားပါ ...ကိုဇေယျာအေးကိုလဲ ပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့ ချိတ်တဲ့နေရာမှာ ကုမ္ပဏီက ဖုန်းလိုင်းကို အသုံးပြုပြီး အင်တာနက်ချိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ကုမ္ပဏီက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကိုတော့ ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် . 12 call ဆိုရင်တော့ *99***1# (or) *99***2# (or)*99***3# တစ်ခုခု ရိုက်ထည့်ရပါတယ် . Dtac ဆိုရင်တော့ *777*1# လားမသိဘူး Dtac တော့ မမှတ်မိတော့ဘူး . ကျွန်တော်ကတော့ အင်တာနက်သုံးမယ်ဆို 12call ပဲ သုံးတယ် . *99***1# ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းရဲ့ နံပါတ်မဟုတ်ပါဘူး . ဖုန်းကို modem အနေနဲ့ အသုံးပြုဖို့အတွက် ကုမ္ပဏီက ပေးထားတဲ့ ကုတ်ပါ . တစ်ကယ်ဖုန်းနံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး . password ကတော့ မပေးလဲ ကိစ္စမရှိဘူး . အဓိကက *99***1# ရိုက်ထည့်ဖို့ပဲ . အဲ့ဒါလေး သတိထားပေးပါ ..ဖုန်းမှာ အင်တာနက်သုံးဖို့ နာရီ မ၀ယ်တတ်ရင် ဒီမှာ ရေးပေးထားပါတယ် ..နောက်တစ်နည်းကတော့ ဖုန်းကို USB port ထိုးထားပြီးကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ကာ အင်တာနက် ကို Direct သုံးတဲ့နည်းပါ . အဲ့ဒီ့နည်းအတွက်တော့ ကိုသုံးမယ့် ဖုန်းရဲ့ modem ကိုတော့ install လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ် . ကျွန်တော့်ရုံးခန်းမှာက အင်တာနက်ကို 24 နာရီရပါတယ် . ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် အခန်းကိုရောက်ရင်တော့ wireless မမိတော့ ဖုန်းနဲ့ ချိတ်ပြီးသုံးရတယ် . Nokia 5300 နဲ့ ချိတ်နေပါတယ် . ဖုန်းချိတ်တာ အကောင်းဆုံးလို့ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ nokia တွေပါ . အကြမ်းခံသလို . လိုင်းအားလဲ အတော်ကောင်းတာကို တွေ့ရပါတယ် . Nokia တွေကို ကြိုးနဲ့ Direct ချိတ်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Nokia pc suite ကို Download လုပ်ပြီး install လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ် . ပြီးတာနဲ့ အောက်က ပုံထဲကအတိုင်းလုပ်လိုက်ပါ .(၁) Nokia pc suite ကို ဖွင့်လိုက်ပါ ..(၂) အဲ့မှာဆို ကျွန်တော်တို့ bluetooth နဲ့ ချိတ်မှာလား USB modem အနေနဲ့သုံးမှာလားဆိုတာ မေးပါလိမ့်မယ်(၃) bluetooth ကနော့ ကြိုးမဲ့ (ကြိုးမလို) ၊ USB modem ကတော့ ကြိုးထိုးပြီးသုံးတာ (ကြိုးလို)(၄) ကိုသုံးချင်တာကိုရွေးပြီး Next ကို နှိပ်လိုက်ပါ .(၅) အခုဆိုရင် ကွန်ပျူတာနဲ့ ဖုန်းနဲ့ ချိတ်ဆက်မိနေပါပြီ . နောက်တစ်နည်းပဲကျန်ပါတော့တယ် . အဲ့ဒါကတော့(၆) ချိတ်ဆက်ပြီးသုံးဖို့ ပြင်ဆင်ရတော့မှာပါ . ဒီက နည်းအတိုင်း ဆက်လုပ်လိုက်ပါ .. Read More
ရာဇာဘွား: driver.genius.pro. ဆိုတာ ကြားဘူးတယ်.အသုံးပြုပုံလေးနဲ့ ဖိုင်လေးတင်ပေးပါလားခင်ဗျာ.. ညီရေ ဒီမှာ အစ်ကိုရေးထားပါတယ် . ဖိုင်ပါတင်ထားပါတယ် . အဆင်ပြေပါစေ .
Dream: ကိုညီနေမင်းရေ... NEC recovery window vista ဆော့ဖ်ဝဲလေး လိုချင်ပါတယ် ။ ဘယ်နေရာမှာ ရနူိုင်မလဲ ဆိုတာလေအခုပေးလိုက်တဲ့ iso ကို nero နဲ့ CD burn လိုက်ပါ . window vista ကို recovery လုပ်နိုင်တဲ့ CD ရလာပါလိမ့်မယ် ... Download လင့်ကို ဒီနေ့ mediafire နဲ့ ifile.it က တင်ရတာ သိပ်အဆင်မပြေတာနဲ့ nyinaymin.net နဲ့ပဲတင်ပေးလိုက်တယ် . Download nyinaymin.net >> Part(1) ၊ Part(2) ၊ Part(3) ၊ Part(4)
kaspersky ရဲ့ version အကုန်လုံးအတွက် တင်ထားပေးတာပါဗျို့
paradise : အကိုရေ .. ကျွန်တော်လိုချင်တာက KAV 7.0.0.125 ကီးပါ .. 2010 အတွက်မဟုတ်ပါဘူး ... :(ပြည်စိုး: kis7key လေးရှိရင် share လုပ်ပေးပါအုံး အစ်ကိုရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကိုရေ .ကျွန်တော် တင်ပေးထားတာ ခေါင်းစဉ်ကသာ 2010, 2009 ဆိုပြီးတင်ထားပေးတာပါ တစ်ကယ်တမ်း အထဲမှာ kaspersky အတွက် version အကုန်လုံးအတွက် ပါပြီးသားပါ . ကဲ ဖိုင်က (၂) ဖိုင်ပါ . ကီးချင်းမတူပါဘူး . . အဟောင်းက ဒီမှာပါ ....အသစ်က ဒီမှာပါ . အသစ်က မနေ့က မှ တင်ပေးလိုက်တာပါ ..နှစ်ခုစလုံးကို ဒေါင်းပြီး အဆင်ပြေတဲ့ ကီးကိုရွေးပြီးသုံးပါ . Download လုပ်ပြီးလို့မှ အထဲမှာ kav.7 မပါဘူးဆိုတော့ ကျွန်တော့ကိုပြောပါ . ဖိုင်လေးက သေးသေးလေးရယ်ပါ . ကီးတွေအတွက် အကုန်လုံးပေါင်းပြီး တင်ထားပေးတာပါလို့ ကျွန်တော် ပို့စ်တင်တုန်းက တစ်ခါတည်း ရေးပေးထားပါတယ် ခင်ဗျာ ..
အိန္ဒိယဦးဇင်း : ကိုညီနေမင်းရေ ..တစ်ခုလောက် ကူညီပါဦး။ အခု ဦးဇင်းသုံးနေတဲ့ ဆော့ဖ၀ဲလေးကို လင့် http://www.techsmith.com/download/camtasiatrialthx.asp ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒါလေးက Sereen ကို Capture ဖမ်းတဲ့ဆော့ဖ၀ဲလေး။ တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေတယ်။ ဒါပေမဲ့ Trial Version ပဲရတယ်။ အပန်းမကြီးရင် serial numberလေး ကူညီစေချင်သဗျာ။
အရှင်ဘုရားသုံးနေတာက version 5.0.1 ပါဘုရား . အခု တပည့်တော် version6ကို တင်ပေးလိုက် ပါတယ်ဘုရား အဆင်ပြေပါမယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ်ဘုရား .. အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ link က Download လုပ်ပါဘုရား . ၃ နေရာကနေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဘုရား Download mediafire ၊
တစ်ချို့ တစ်ချို့သော program တွေဟာ ဖြုတ်လို့မရတာမျိုးနှင့် install လုပ်ထားပေမယ့် add and remove programs မှာ မတွေ့တာမျိုးတွေအတွက် အဆိုပါ programs တွေကို ပြန်ဖြုတ်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ မသိတဲ့သူတွေအတွက် အတော်လေး ရွာလည်တတ်ပါတယ် . အခု ဒီ program ကတော့ အဲ့ဒီ့ အခက်အခဲကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ် . လွယ်လွယ်ကူကူသုံးရအောင် Portable တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . Install လုပ်စရာမလိုပါဘူး .. အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ .Download ifile.it ၊ Download mediafire ၊ Download multiupload
mail ကို အခုမပို့ဘဲ နောက်မှ ဘယ်လို ပို့မလဲ နှင့် Outlook express မဟုတ်တဲ့ Thunderbird
anti.spy11@gmail.com: အကို ကျွန်တော်လေ mail ပို့ချင်လို့ အဲဒီ့ mailကို ရောက်ချင်တဲ့နေ့မှ ရောက်စေချင်တယ် အဲဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဟင်Outlook express အကြောင်းကိုတော့ ဒီမှာ ရေးပေးထားပြီးသားပါ .ဒါကတော့ ညီလေး လား ညီမလေးလားတော့မသိဘူး တစ်ယောက် မေးလာလို့ ပြန်ဖြေပေးတာပါ .. ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ မေးလ်တွေကို အခုအချိန်မှာ မပို့ချင်ဘူး . နောက် ၁ နာရီ ဒါမှမဟုတ် နောက်ထပ်5နာရီ အစရှိသဖြင့်ပေါ့ . အဲ့လိုအချိန်မှာ အချိန်ကိုက် ပို့ချင်တယ် . တစ်ကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Blog post ကို အချိန်ကိုက်ပို့ရတာ လွယ်ကူပေမယ့် . mail ကျတော့ နဲနဲ အလုပ်ပိုသွားတယ် . လူတော်တော်များများက ဒါကို သိပ်စိတ်မ၀င်စားကြတာလဲ ပါမယ်ထင်ပါတယ် . ဟုတ်တယ်လေ မေးလ်ပို့တာပဲ ဘယ်အချိန်ပို့ပို့ အတူတူပဲဟာကိုလို့ ထင်ကြမှာပါ . ဒါကလဲ မွေးနေ့တွေအတွက် ပို့ပေးတဲ့မေးလ်မျိုးအတွက် အဆင်ပြေအောင်လို့ ရေးပေးလိုက်တာပါ . ဘလောဂ်မှာတော့ ဘယ် Blog မှ ရေးထားသေးတာ မတွေ့လို့ ပြန်ရေးလိုက်တာလဲ ပါပါတယ် . အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ ... နောက်တစ်ခု ပြောချင်တာက Outlook express ကို သုံးဖို့အတွက် အဆင်မပြေပါဘူးဆိုတဲ့ သူများအတွက်လဲ ဒါလေးက outlook express ထက်ပိုကောင်းတဲ့ အဆင်အယဉ်တွေနဲ့ အတော်လေး လှပတာကို တွေ့ရပါတယ် . Firefox ဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ . လုပ်ပေးလိုက်ရင် အလန်းတွေချည်းပဲ . Firefox ကို သဘောကျတဲ့သူ လက်ညှိုးထောင်ဆိုရင် မောင်ညီနေမင်း က ထပ်ဆုံးက ပါပြီးသားပဲ .. ကျွန်တော်ကတော့ Firefox crazy သမားလေ . ဘာ့ကြောင့်လဲလို့မေးရင် အဖြေက ရှိပြီးသားပဲ Add-ons ရဲ့ အားသာချက်တွေကြောင့်ပေါ့ . ကဲပါ အောက်မှာ လုပ်နည်းပေးထားပါတယ် . သေချာဖတ်ပြီးလုပ်လိုက်ပါ ..Send Later Extension [SL8TR](၁) ပထမဦးဆုံး Thunderbird ကို Download လုပ်ယူလိုက်ပါ .(၂) ပြီးတာနဲ့ ရလာတဲ့ Thunderbird ကို install လုပ်လိုက်ပါ .(၃) Outlook express မသုံးချင်သူများနှင့် အဆင်မပြေသူများ လဲ ဒီ Thunderbird ကို Outlook express နည်းတူ အသုံးပြုလို့ရပါတယ် . ကျွန်တော့်အထင် Outlook express ထက်ကို ပိုကောင်းသေးတယ်ဗျ . သူ့မှာက add-on ပါတယ်လေ ..(၄) အခုဆိုရင် Thunderbird အတွက်တော့ အိုကေသွားပြီ . ပြီးရင် အောက်ကပေးထားတဲ့ sl8tr.xpi Add-on ကို Download ထပ်လုပ်လိုက်ပါ . လင့်ကတော့ အရင်ကတိုင်း ၃ နေရာကနေ တင်ပေးထားပါတယ် .Download sl8tr.xpiDownload ifile.it ၊ Download mediafire ၊ Download multiuploadပြီးသွားပြီလား ပြီးသွားရင် Thunderbird ကို ဖွင့်လိုက်ပါ ..(၅) ပုံထဲမှာပြထားသလိုမျိုး Tools >> add-on ကို သွားလိုက်ပါ(၆) ပြီးရင် Add-ons >> install ကို နှိပ်ပြီး အပေါ်က Download လုပ်ယူထားတဲ့ sl8tr.xpi ကို ရွေးလိုက်ပါ .(၇) Open ကို နှိပ်ပြီး Add-on ကို install လုပ်လိုက်ပါ ..(၈) Thunderbird ကို restart လုပ်လိုက်ပါ ...အားလုံးအိုကေသွားရင် အောက်ကအတိုင်း စလုပ်ပါတော့မယ် .(၁) Write ကို နှိပ်ပြီး mail စပို့ပါတော့မယ် .(၂) သူက ကို့အကောင့်ကို တောင်းရင် ပို့မယ့် email အကောင့်ကို ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ . gmail ဆိုလဲ gmail ပေါ့ .(၃) ပို့မယ့်မေးလိပ်စာဖြည့် ပို့မယ့်စာသားရေးသားတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ ရေးသားမယ့် font ကို ပြောင်းလို့လဲ ရပါတယ် . zawgyi ဆိုလဲ zawgyi ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ(၄) File >> sent later (ctrl + shift + return) ကို ရွေးလိုက်ပါ .(၅) ကဲ အဲ့မယ်ပေါ်လာတဲ့ Sent this email later ကိုတဲ့ Box အကွက်မှာ စာဖတ်သူပို့ချင်တဲ့ အချိန် ရက်စွဲ တွေကို ဖြည့်ပြီးပို့လိုက်လို့ရပါပြီ . အားလုံးပဲ အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေဗျာ .. အောက်မှာ ပုံတွေနဲ့ ရှင်းပြထားပါတယ် . Read More
nanoonaw: ကိုညီနေမင်းရေ Password က အမည်းစက်ကလေးတွေ ကိုဖော်ကြည့်တဲ့ software ရှိရင် ပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာကျွန်တော် ဒီပို့စ် မှာ ရေးပေးထားပြီးသားပါ သေချာ မရှာလို့ဖြစ်မှာပါ . =x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=xxမင်းမင်း: ကျွန်တော်ဒီမှာ winXtheme Os ကိုဒေါင်းလော့လုပ်ပြီး၊ install လုပ်တာအကိုရေ start Menu ဘားပျောက်သွားလို့ ....ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ system restore ပြန်လုပ်လိုက်ကြည့်ပါ . အဆင်ပြေသွားမှာပါ .system restore လုပ်ပုံလုပ်နည်းကတော့ လွယ်ပါတယ် . Start >> Programs >> Accessories >> system tools >> system restore ကို ရွေးပြီး ၂ ရက်လောက် နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီး restore ပြန်လုပ်လိုက်ပါ . =x=x=x=x=x=x==x=x=x=x=xxsoco : IDM ကို ဘယ်လို့ Update လုပ်ရတယ်ဆိုတာကို ပြောပြပေးပါ့လားစာအုပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . ကို့ဟာကို ဖတ်ပြီး လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ . Download ebook from ifile.it =x=x=x=x=x==x=x=x=x=x=x=xမြတ်ကိုကို : portable ကိုဘယ်လိုသုံးမလည်းဆိုတာနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါအကိုPortable ဆိုတာမျိုးဟာ မိမိကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်စရာမလိုပါဘူး .. Flash drive မှာပဲ ဒီ program လေးကို သိမ်းထားပြီး ကြိုက်တဲ့ကွန်ပျူတာမှာ သွားထိုးပြီး သုံးလို့ရပါတယ် .. ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတဲ့ portable ဟာဆိုရင် အခုဆို အတော်လေး နေရာယူလာတာတွေ့ရပါတယ် .. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် computer မှာ install စရာမလိုဘဲ ကိုသုံးချင်တဲ့ program ကိုသုံးနိုင်တယ် .. နောက်တစ်ချက်က Program အကြီးလိုမျိုး ကြီးမားတဲ့ဆိုက်မရှိပဲတာပါပဲ Read More
ဒါကတော့ DJ ၀ါသနာပါသူများ အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် . ကျွန်တော်ကတော့ သီချင်းကို နားသာထောင်တတ်တာ . သိပ်ပြီး နားမလည်လှဘူးဗျ . ဂီတဖက်ကို သိပ်ပြီး မထူးချွန်တဲ့အတွက် ဒီဂျေ ကစားတာကို မရှင်းပြနိုင်တဲ့အတွက်တော့ နားလည်ပေးစေချင် ပါတယ် . အခုပေးလိုက်တဲ့ DJ program ဟာ အခုလက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ Resort က ပါတီတွေမှာ ကစားနေတဲ့ program ပါ . အရမ်းလဲကောင်းပါတယ် . ဒီ program က သီချင်းတွေကို Mixed လုပ်နိုင်သလို တစ်ကယ့် DJ စက်ကစားတဲ့ အရည်အသွေးနည်းတူ ကွန်ပျူတာနဲ့ ကစားနိုင်ပါတယ် . တစ်ကယ့် စက်တစ်လုံးကတော့ သွားမမှန်းလိုက်နဲ့ ဒီမှာ အောက်ဆုံးက စရေရင် ဒုတိယအဆင့်ရှိတဲ့ စက်တစ်လုံးတောင် ဘတ် 40000 ကျော်ပေးရတယ် . မြန်မာငွေနဲ့ဆို 1440000 ကျပ် လောက် ရှိမယ် . ၀ါသနာပါတဲ့သူများ ကစားနိုင်ရန်အတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ ..
တေဇာ: ကူညီပါဦးကိုညီရေ... window အသစ်တင်လိုက်တာ အသံမထွက်ဘူး ........ ဘာမှမကြား ရတော့ဘူးခင်ဗျာ ... ညီညီအတွက်ကိုလဲ အောက်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အခုတင်ပေးလိုက်တာကတော့ virus ကြောင့် window တင်ပြီးခါကျမှ audio driver မရှိသူများအတွက် ရည်စူးပါတယ် . အခုတင်ပေးတဲ့ program ကတော့ ဘယ် audio device ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုလို့ရပါတယ် . အသံမထွက်သူများ ထွက်ကိုထွက်လာရပါစေမည် . အာမခံပေးပါတယ် . ပြန်အမ်းတွေတော့ အစကတည်းက လက်မခံထားလို့ . ပိုက်ဆံတော့ ပြန်မအမ်းတော့ပါဘူး . လုပ်နည်း (၂) နည်းတင်ပေးလိုက်ပါ့မယ် ..
(၁) ဒီကို နှိပ်လိုက်ပါ .
(၂) ပြီးလျှင် I accept to the above ကို အမှန်ခြစ်ပေးပြီး Next ကို နှိပ်ပါ ပြီးလျှင် ကို တင်ထားသည့် ၀င်းဒိုးကိုရွေးပြီး software ကို ဒေါင်းလော့လုပ်လိုက်ပါ ..
(၃) window xp sp-2 တင်ထားတယ်ဆိုရင် xp sp-2 နဲ့ တန်းတန်းက Download အောက်က Go ဆိုတာ အဲ့ဒါ Download ချဖို့အတွက် လင့်တွေပေးထားတာပါ . အဆင်ပြေတဲ့လင့်ကသာ ဒေါင်းလိုက်ပါ
ပြီးတာနဲ့ အဲ့ကောင်ကို run လိုက်ပါ .. အသံထွက်လာပါလိမ့်မယ် ... တစ်ချို့ mother board တွေ ရဲ့ audio ရှာလို့မရရင် ဒီဆိုက်ကနေပဲ download လုပ်ယူပြီး သုံးရတာပါ ဒီဆိုက်လေးက audio အတွက် board အားလုံးနဲ့ကိုက်ညီပါတယ် ... အဆင်ပြေပါစေဗျာ .. audio အတွက် board CD မရှိရင် ဘာမှစဉ်းစားမနေပါနဲ့ realtek သာ ဒေါင်းလိုက်ပါ ...
ဒါကနောက်တစ်နည်းပါ ကို့ motherboard က ဘာအမျိုးအစား နဲ့ pc မှာ တပ်ထားတဲ့ hardware device တွေက ဘာတွလဲ ဆိုတာကို စစ်ဆေး ပေးပါတယ် . ဥပမာ board audio မှာ ဘာတွေ လိုအပ်နေတယ် ဆိုတာကို စစ်ဆေးပေးတဲ့ အပြင် လိုအပ်နေတဲ့ driver တွေကို update လုပ်ခိုင်း ပါတယ် . လွယ်ပါတယ် .
ကဲ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ ...